elon musk Archives - SmartMe
Archives tag: elon musk
Dom » Entries tagged with "elon musk"
"Ataovy mpamokatra herinaratra ny tranonareo." Elon Musk lasa adala?
Navoakan'i	Sebastian K.
Elon Musk dia nanaiky vao haingana fa tiany ny trano rehetra ho tonga toby famokarana herinaratra afaka mamokatra sy mitahiry angovo. Mazava ho azy, ny zavatra rehetra dia hatao amin'ny alàlan'ny vokatra Tesla. Ireo mpamokatra herinaratra eto an-toerana dia hamokatra ampy ...
IoT, Science, Vaovao
Starlink any Polonina - Afaka manafatra ianao izao! Fantatray ny vidiny sy ny ora fanaterana eo ho eo
23 Febroary 2021
Ary izany ny hafatra! Eto izahay dia nahazo fanasana avy amin'ny Starlink hanafatra ny fitaovan'izy ireo! Ny filaharan'ny fampiharana dia manisa, satria ireo izay voalohany manafatra Internet amin'ny kintana avy amin'i Elon Musk no voalohany ...
Mahomby ny Starlink!
10 Febroary 2021
Navoakan'i	Hubert Ryś
elon musk, vaovao, spacex, starlink
Na eo aza ny zava-misy fa ny teknolojia napetraky ny orinasan'i Elon Musk dia mbola eo am-piandohany ary ny vidin'ny vokatra dia tsy ambany indrindra, Starlink dia fahombiazana lehibe! Tsara ary hihatsara ihany! Ao amin'ny zanabolana misy antsika izao dia ...
Tesla Semi eny an-dalana amin'ny faran'ity taona ity
2 Febroary 2021
elon musk, auto auto, tesla semi
Tesla Semi dia kamio elektrika izay natolotry ny Elon Muska tamin'ny 2017. Hanomboka tsy ho ela ny famokarana azy. Na dia efa ela be aza taorian'ny fanambarana ofisialy ity fiara revolisionera ity, Tesla ao ...
Starlink ve hanakorontana ny lanitra? Mampanantena fanatsarana i Elon
17 Janoary 2021
Starlink dia tambajotram-satelita izay antenaina hanova ny fidirana amin'ny Internet. Misaotra azy ireo, ho hita isaky ny vazan'izao tontolo izao izy io. Saingy misy ny vidiny amin'izany izay tsy tian'ny astronomia aloa. Ny satelita dia mamelatra be ny lanitra, manakana ...
Mars dia hanana ny lalàny manokana fa tsy etỳ an-tany! Manana olana amin'izany ve ianao? Tsy mahazo Starlink ianao.
1 Novambra 2020
elon musk, March, spacex, starlink
Elon Musk. Indraindray aho manontany tena raha tena misy io bandy io. Raha nisy sarimihetsika namboarina momba azy dia heverina ho tsy dia misy zava-misy noho ny Fast and Furious 47: fitsangatsanganana PKS izany. Ary na izany aza, manaitra indray i Elon. On ...
Fantatray ny vidin'ny Starlink, ny Internet avy any Elon Musk! Nanomboka ny fitsapana beta voalohany.
28 Oktobra 2020
Starlink dia iray amin'ireo tetikasan'i Elon Musk izay nahasarika ny sain'ny maro. Samy noho ny zavatra ho entiny amin'ny olona any amin'ny vazan-tany lavitra ary inona no hoesoriny amin'ireo astronoma. Starlink dia hiroso indrindra amin'ity ...
4 taona hanjanany an'i Mars. Nanomboka ny fanisana i Elon.
18 Oktobra 2020
elon musk, March, spacex
Raha mahita ity anaram-boninahitra ity dia maro amin'ireo tsy mino an'i Elon no hitaraina avy hatrany fa tiany ny manome toky, ary mahalana no mitazona fampanantenany. Ary misy zavatra ao, sehatra toy izany misy optimista be loatra. Tsy manova ny zava-misy izany raha ny filazan'i Elon ...
Starlink manarona ny lanitra? SpaceX dia miady aminy, fa raha ny filazan'ny Astronoma - tsy ampy
12 Septambra 2020
Mila manao sorona indraindray ve ny fandrosoana ara-teknolojia? Starlink dia hevitra tsara hanomezana olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao amin'ny Internet, any amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tany. Na izany aza, misy iray fa. Nanomboka nandoto ny lanitra isika. Satelita an'arivony izay ...
Starlink avy amin'i Elon Musk misy valiny tsara sy tsara kokoa
7 Septambra 2020
Iray amin'ireo tetikasan'i Elon Musk, ny internet avy amin'ny habakabaka "Starlink" dia nihatsara. SpaceX dia miasa tsy tapaka amin'ny fanatsarana ny teknolojia, ary nahavita nanatsara be ny isa hafainganam-pandeha teo aloha izy ireo. Starlink dia tambajotram-satelita izay ...